टिचिङको निर्देशकका लागि ३ जनाको नाम सिफारिस, निजीमा काम नगर्ने सर्त
काठमाडौं – त्रिवि शिक्षण अस्पतालको निर्देशकका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ। निर्देशक छनोट समितिले आइतबार वरिष्ठताका आधारमा तीन जनाको नाम त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पठाएको हो। सिफारिस हुनेमा डा. प्रेम खड्का, डा. वाइपी सिंह र डा. सुशील शील्पकार छन् ।